Ukuphupha ngeePitikoti ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iipitikoti zazihlala kumhla wama-50s kwinkulungwane yama-XNUMX. Kungenxa yokuba apha iziketi ezinde nezibanzi, ezikwakhulisa isinqe, zibonisiwe ngale petticoat ikhukhumeleyo.
Kodwa ipitikoti isasetyenziswa nanamhlanje ukunika ilokhwe okanye umbhinqo ubukhulu obukhulu. Ngokukodwa kwindawo ye-rockabilly, ezi zihlala zisetyenziswa kubude obuphakathi. Iipitikoti ezimfutshane zifunyanwa ikakhulu phantsi kweengubo zabalindi eMardi Gras. Kwinguqulelo ende, iipitikoti zinxitywa nangaphantsi kweelokhwe zomtshato.
Kuba indawo yokusetyenziswa kwepitikoti inokwahluka kakhulu, iimeko ezihamba nazo kufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo xa kutolikwa uphawu lwephupha. Kungenxa yokuba eminye imiba enomdla inokufunyanwa koku.
1 Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, iphupha lepitikoti linokulumkisa ngokuchasene nenkunkuma egqithisileyo. Kuya kufuneka ulumke ngokuzikhukhumeza. Endaweni yoko, kuyacetyiswa ukuba ubekhona el mundo vuka. nomsindo.
I-petticoat eboniswe ngokukodwa ephupheni inokubonisa ukuba umntu ufuna ukutsala umdla wabanye kwihlabathi elivukayo. Nalapha, kufuneka kukhathalelwe ukungayibaxi le ndlela yokuziphatha. Ukuba ubona umfazi enxibe ipitikoti phantsi kwesiketi ephupheni, unokuzihlekisa kwihlabathi elivukayo.
Ukunxiba ipitikoti phantsi kwengubo kunokubonisa ngathi liphupha lakhe. Iimeko zobomi Ndifuna ukuphucula. Ukuba umntu unepitikoti kuphela ephupheni apho iimpahla zangaphantsi zinokubonakala khona, omnye unokuvezwa kwihlabathi elivukayo.
Ipitikoti eyenziwe ngeyiloni ihlala ibizwa ngokuba luphawu lwephupha ngokwenkcazo jikelele yephupha. ubugorha lomntu uphuphayo ngombandela othile. Kwelinye icala, ipitikoti eqine kakhulu ibonisa ukuba ubambelele kakhulu kwizimvo nakwizimvo zakho. Ukususa isiketi esichaziweyo kunokubonisa ukuba iprojekthi ecwangcisiweyo ayizukuphunyezwa.
Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolikwa kwengqondo
Uhlalutyo lwengqondo lwephupha litolika i-petticoat ephupheni ngendlela efanayo ne-hoop skirt. Ke ngoko, umxholo wokulala onjalo unokuchaphazela umnqweno wephupha lokusondela kunye ukuqhelana bhekisa kwinto ongathanda ukuba nayo nomnye umntu.
Ukuba indoda iphupha ngesiketi esinesiqingatha, kufuneka ihlale ilwazi uloyiko lwayo lokuzenza isidenge phambi kwabanye. Unoloyiko lokuba iimfuno zoluntu azizukufezekiswa. Xa ujongwa njengenxalenye yempahla, uphawu lwephupha 'petticoat' lunokubonisa ukuba ufuna ukuzibonakalisa ngcono ebomini. Kungenxa yoko le nto ufuna eyakho ngaphezulu kwako konke Yomeleza Yiya ngaphambili.
Ukutolikwa kwengqondo, umbala wepitikoti unokudlala indima ebalulekileyo ephupheni. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba usebenzise imiba yophawu "lwemibala" yephupha.
Uphawu lwephupha «Petticoat» - ukutolika kokomoya
Ipitikoti inokuqondwa njengophawu lwephupha ngokutsho kohlalutyo olugqithisileyo lwephupha ngengqondo yepitikoti kwaye ngenxa yesicelo salowo ulele enye. ukukhuselwa ngokomoya bhekisa.